Ndingakwanisa here kuva nechikamu chekupa mazano kubva kuAmerica pane nyanzvi?
Vakawanda vedu (tisingarevi mao Amazon mazvigadziri nyanzvi) anoziva kuti iyi nzvimbo yakawanda yepamusika yemusika inonyanya kushandiswa kwekutsvaga injini injini. Uye ichocho ndechokuti Amazon ingangodaro nzvimbo huru pane iyi yakadaro yakambowanikwa paWebhu. Icho chinoreva kuti huwandu hunodiwa hwemakwikwi emakemikari ndehukukutu uye huri nechisimba uko. Saka, ungapona sei pasi penyika iyo isina kunaka yekutonga pamusoro peAmerica pamusika? Zvakanaka, ndinotenda kuti kiyi yekubudirira kwekutengeserana kuAmazone inonyatsoitika mune zvigadzirwa zvekugadzirwa kwepamusoro kwezvakarurama zvinyorwa zvemashoko kuitira kuti iwe uve nehuwandu hwekutsvaga paIndaneti pane chinhu chinotsvaga ipapo. Uye pasi apa mune mamwe mazwi anonzwisisika uye mazano akachenjera kubva kuAmazon anowanzoona nyanzvi yako kuti utakure peji yako nekugadzirisa kune imwe nhanho itsva.
Mazano Okugadzirisa & Tricks kubva kuAllow Listing Expert
Chokutanga, ngatitarisei - chigadzirwa chako chekugadzirisa nekugadzirisa inzira inoramba ichiuya kusvikira pakuguma - remover senha phpmyadmin. Ndinoreva kuti Amazon Best Sellers uye inowanzogadziriswa kuverenga kuverenga inowanzoenderana nehuwandu hwekutengeserana kwekushanda, yakabatanidzwa nenzira yakarurama yezvakagadzirwa zvinyorwa kugadzirisa kwechinhu chekutsvaga. Uye ichocho ndechokuti iyi yekutanga kuverenga maitiro inogara ichidzokororwa kuitira kuti iongororwe nguva imwe neimwe uye inoratidza zvose zvangobva kutengeswa nhoroondo yezvose zvishandiso zvinotengeswa pamusoro apo. Uye heino mamwe mazano anokosha uye mazano okuzivikanwa kwete chete nezvose Amazon nyanzvi nyanzvi, asi nevose vanozvikudza mune zvekutengesa muIndaneti vachipa chero rudzi rwezvinhu zvakatengeswa. Saka, hezvino iwe unofanirwa kuziva pamusoro peAmerica zvinyorwa zvekunongedzera kugadzirwa, muchidimbu.
Kutorwa kazhinji, une chimwe chinhu chakakomberedzwa makiromita makumi mashanu ekuzadza imwe neimwe yezvinhu zvishanu kutsvaga masimi. Uye chinhu chinonyanya kuoma pano chiri kushandisa hutano hwemhando yako nekuchenjera uye kuita zvose zvaunogona kuti uite sehuwandu hwakareba hunotsvaira mutsva kutsvaga sezvinogona.
Munhu mumwe oga kutsvaga mazwi (kwete mazwi)
. Cherechedza, zvisinei, kuti chidimbu chezvinyorwa zvakanyatsoshandiswa zvinowanikwawo zvakasimba musimboti (zvichibva pamahofisi ehurumende yeAustralia mazano).
. yakawanda kutengesa nhoroondo;
2. iyo inotengeswa yakanyanya kufambira mberi (mwedzi nemwedzi, vhiki nevhiki, nezvimwe. );
3. kukwikwidzana kwemiti yemutengo uye kusarudzwa;
4. kuwanikwa ikozvino.
Long-Tail Tsvaga Mitemo
Usashatisa nguva yako nemabasa pakushandisa chero mushure mutsara kana mumwe munhu kutsvakurudza mazwi atove akabatanidzwa mubhuku rako rekushandisa, pamwe chete ne yebhuruti inotenderera pane peji rako rechigadzirwa.
Inzwa wakasununguka kutarisa chero zvinyanzwisiso zvakakwana uye zvakasiyana-siyana zvinonzi LSI keyword, izvo zvinogona kushandiswa nevatengi vakawanda vanogara vachitarisa chinhu chimwe chete.
Unofanirwa kudzivisa kushandisa zvinyorwa zvinyorwa, kazhinji nokuti izvi zvichatora urefu hwako hwakatowanikwa kare chikamu cheseji yezvigadzirwa.
Usanetseka nezvimwe zvipupuriro zvakasiyana-siyana, imwe chete / yakawanda, pamwe chete nemhando dzakasiyana-siyana dzakasiyana-siyana - Amazon inoti kuedza kwakadaro kunenge kusina mubatsiro, nokuti injini yekutsvaga inowanzobata izvi zvakasangana nenzira imwecheteyo.